Faa'iidooyinka la sheeganayo ee mamnuuca daroogada • daroogada Inc.eu
Bilihii ugu dambeeyay, golaha wasiirrada ayaa bilaabay labo soojeedin oo ay ku doonayaan inay ku soo aruuriyaan lacago wali sharci ah oo hoos imanaya howlgalka Sharciga Opium. Bishii Diseembar 2019 kondigde Xoghayaha Gobolka Blokhuis (VWS) wuxuu muujinayaa inuu ku shaqeynayo xayiraad op nitrous oxide adeegsiga madaddaalada adoo ku dhejinaya Liiska II ee Sharciga Opium oo baxay baxay Maarso 2020 biilka marka lala tashanayo, taas oo suurtogelinaysa in la mamnuuco kooxaha maandooriyaha ah. Hindisahan, dhammaan kooxaha daawooyinka naqshadeeyayaasha ayaa lagu dhejin doonaa (cusub) Liistada Ia ee Sharciga Opium. Xoghayaha Gobolka Blokhuis iyo Wasiirka Grapperhaus waxay damacsan yihiin inay tan u adeegsadaan ilaalinta caafimaadka bulshada iyo sidoo kale inay ka hortagaan soo saarista iyo ka ganacsiga walxahaas.
1 Qosol qosol
2 Kooxaha mukhaadaraadka ayaa mamnuucay
3 Faa'iidooyinka mamnuucida?
Sida iska cad, ganacsatada si sharci ah uga ganacsada qosol gaaska ama daroogada naqshadeeyayaasha ayaa ka soo horjeeda mamnuucista. Kaliya tani kama dhigeyso ganacsiga mid aan macquul aheyn, waxay sidoo kale tilmaamayaan faa'iido darrooyinka mamnuucista. Dhowr ganacsato ah ayaa ku biiray si ay uga hortagaan soo jeedinta golaha wasiirada. Waxay la yimaadaan waxyaabo kale duwan oo mamnuuc ah.
Iyada oo laga jawaabayo ku dhawaaqida mamnuucida gaaska,, BVLL (Iskaashatada Warshadaha ee Shirkadaha Nitrous Oxide) waxay diyaarsadeen sharci anshaxeed oo ay ku hogaaminayaan qaybinta iyo iibinta nitrous oxide jihada saxda ah. Xeer-dhaqameedka akhlaaqda waa inuu ahaadaa soo celinta kalsoonida waaxda iyo yareynta sumcadda xun ee waaxda. Shuruucda anshaxa waxaa ku jira xeerar, sida da'da ugu yar ee iibka ah 18 sano, sumad tayo leh oo loogu talagay ganacsatada badeecada fiican leh iyo tixgelin dheeraad ah macluumaadka iyo ka hortagga. Sida laga soo xigtay BVLL, qaabkan is-xakameynta ayaa ah bedel wanaagsan oo laga mamnuuco gaaska qosolka leh. In a warqad warqad u socota Xoghayaha Gobolka Blokhuis (VWS) ayaa ka codsatay ururka warshadaha inay tixgeliyaan qaanuunka anshaxa iyo inay la tashadaan waaxda mustaqbalka dhow.
De jawaabtii Xoghayaha Gobolka ma ahayn waqti dheer imaatinka. Uma hiilinayo soo jeedinta BVLL wuxuuna adkaysanayaa mamnuucida gaaska qosolka ee uu horay u shaaciyay, in kasta oo aysan jirin aqlabiyad u badan in la mamnuuco Golaha Wakiillada. Marka laga hadlayo, Xoghayaha Gobolka wuxuu tixraacayaa talo bixinta Qiimeynta iyo Kormeerka Barta Isuduwidda daawooyinka cusub ku saabsan waxyeelada ay leedahay oksaydhka oksaydhka laga bilaabo Noofambar 2019. Waxa xusid mudan, warbixintan la-talinta ahi waxay sheegaysaa in "meelaynta sharciga Opium u muuqdo inay tahay tallaabo adag oo lagu gaadhayo himilooyinka la-dagaallanka isticmaalka xad-dhaafka ah iyo la dagaallanka isticmaalka dhallinyarada." waxay kordhin kartaa ku lug lahaanshaha dambiyada ”, sida ay sheegeen guddiga.
Guddigu wuxuu u arkaa in badan oo xaddidaya keenista gaaska lagu qoslo. Xaaladdan dhexdeeda, guddigu wuxuu ka fekerayaa soo bandhigida baakad xaddidan iyo u hoggaansamida xeerarka CLP iyo REACH. Intaa waxaa dheer, guddigu wuxuu u arkaa "muhiimad weyn in la siiyo macluumaadka iyo in la qaado tallaabooyin ka hortag ah".
Iyadoo la qorayo koodhka anshaxa BVLL wuxuu buuxiyaa talooyinka Qiimeynta Barta Isuduwidda iyo Kormeerka dawooyinka cusub. Iyadoo taasi jirto, Xoghayaha Gobolka Blokhuis wuxuu kusii socdaa wadadan wuuna diiday inuu la tashado waaxda.
"Way cadahay inaanan u soconayn is xakameyn iyo waliba inaan ku lug lahaan doonin ganacsatada isticmaalka madadaalada horumarka."
Waxaan u maleynayaa inay wax aad u xun u tahay wasiir inuu aamino inay tahay inuu sidan wax uga qabto. Waaxdu way midowday waxayna qaadatay masuuliyadeeda iyadoo la raacayo talooyinka guddiga latalinta ee Golaha. Iyada oo taa laga jawaabayo, Golaha Wasiiradda ayaa ku dhejinaya xayiraad ay adag tahay in la dhaqan geliyo, taa baddalkeed, waxay horseedi doontaa in iibinta sunta loo yaqaan 'nitrous oxide' si aan kontorool lahayn loogala baxo wareegtada caadiga ah.
Kooxaha mukhaadaraadka ayaa mamnuucay
Isku soo wada duuboo, waxaa jiray 133 jawaabood oo ku saabsan biilka si loogu baddalo Sharciga Opium sababta oo ah walxaha cusub ee nafsiga ah loo gudbiyey wada tashi bishii Maarso 2020. Waxqabadka ficil ahaan ee Ururka Wadatashiga ee Wadatashiga Smart Dutch (VOD), laga bilaabo KH Talo Sharci iyada oo ka wakiil ah soo-dejiyeyaasha wadaagga ah iyo qaybiyayaasha maandooriyaha nafsadda, ee Ururka Barista Holand iyo ka Mondrian iyo Jellinek dhammaantood waxay leeyihiin isla ama kayar isla fariin isku mid ah. Mamnuucista kooxda maandooriyaha ayaa ah cabbir la wadaago. Mamnuucista koox maandooriyaha ayaa sidoo kale mamnuucaysa walxaha aan laheyn saameyn nafsi ah, oo aan waxyeello u laheyn caafimaadka ama xitaa saameyn waxtar leh. Tan waxaa ka mid ah daawooyinka, kaabeyaasha nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada ka kooban. Waxyeelada maandooriyaha ayaa aan la soo bandhigin, taasoo ka dhigaysa wax aan suurta gal ahayn in lagu meeleeyo Xeerka Opium. Soojeedintani waxay xadgudub ku tahay mabda'a sharci ahaanta, maxaa yeelay ma cadda taas micnaheedu yahay inay dhammaantood ku dhici doonaan inta uu gaarsiisan yahay sharciga loo yaqaan 'Opium Act'. Khibradaha la xiriira mamnuucista kooxaha kale ee maandooriyaha (oo ay ku jiraan Boqortooyada Midowday iyo Poland) waxay muujinayaan in soo bandhigida mamnuucida maandooriyaha ay saameyn xun leedahay oo aan ku biirin ilaalinta caafimaadka bulshada. Mamnuucista kooxda maandooriyaha waxay horseed u noqotaa isticmaalka daroogada, dhacdooyin badan iyo tahriibinta maandooriyaha.
Sannadkii 2012, RIVM waxay horey uga digtay tan warbixintii ku saabsanayd "Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka guud ee ka dhasha maaddooyinka cusub ee cilmu-nafsiga leh". Laakiin sida loogu talagalay warbixinta RIVM ee gaaska qosolka, dowladdu waxay doorbidaysaa inay warbixintan dhinac iska dhigto. Marka ay sidaas samaynayso, dawladdu waxay umuuqataa in cidina aysan akhriyin warbixinnadan runtiina aysan ahayn in qofna qaadan doono talooyinka ku jira. Warbixinnada waxay u adeegaan oo keliya inay noqdaan caddeyn la isku qurxiyo oo mamnuuc ah, taas oo golaha wasiirradu horayba u go'aansadeen si kasta. Nederland ma jirto siyaasad daroogo oo ku saleysan daroogo, laakiin eex.
Xeerku wuxuu ka fiican yahay reebitaanka, marka loo eego nooc kasta cilmi saynis, laakiin guusha kaliya ee wasiirku ka gaadhay inuu wax uun ku gaadho niyaddaas ayaa wali taagnaa muddo bilo ah, sida guud ahaan horumarka la’aanta ku xeeran tijaabinta xashiishadda. Inta ugu badan Macluumaadka "hadda" taariikhdu waa Disembar 2019. Degmooyinka ku lugta leh ayaa hadda tixgelinaya ku dhowaad aan macquul aheyn in mudadan golaha wasiirada tijaabada haramaha la bilaabi doono.
Abuuritaanka nidaam shaqeynaya oo hagaya iibinta iyo qaybinta kheyraadka qaar, ayaa sidoo kale aad uga adag ka mamnuucista iyaga. Waxaa suuragal ah in golaha wasiirada uu doorbidayo xayiraad. Siyaasiyiinta Gentlemen waxay doorbidaan inay caajisnimo noqdaan kuwa daalan. Maxaad ugu dhibayso inaad nidaamiso kheyraadka aadan adigu istcimaalayn haddii sidoo kale aad mamnuucin karto?
Dowladda uma muuqato inay dooneeyso inay fahanto in dalabkaasi uusan yareyn doonin haddii walxaha qaarkood la mamnuuco. Faa'iidooyinka mamnuucida gaaska qosolka leh iyo daroogada naqshadeeyayaasha gabi ahaanba aniga ma cadda. Mamnuuciddu waxay lumisay fursad badbaado iyo mas'uuliyad leh qaybinta agabkan. Mamnuucida kheyraadkan ayaa ah mid ku baxa shaqada iyo dakhliga canshuuraha. Mamnuucida walxahaas waxay keenaysaa soo saarista walxo cusub, oo ka khatar badan, kuwaas oo la iibiyo iyada oo aan la hubin da'da, tayada ama asal ahaan. Mamnuucidda hababkaas ayaa horseedaysa kordhinta adeegsiga booliska iyo garsoorka sidaas darteedna waxay ku kacdaa kharash badan bulshada. Mamnuucidda qaababkani waxay horseedaa in marwalba sii kordho dambiile ku macaamilka macaamilka. Mamnuucida dawooyinkaan ayaa horseedaysa isticmaalka daroogada oo badan, dhacdooyin badan iyo tahriibinta maandooriyaha oo sharci darro ah. Mamnuucidda maandooriyaha ayaan wax ku biirinayn ilaalinta caafimaadka bulshada. Oo waxay ahayd dhab ahaan waxa ay ahayd waxa ku saabsan oo dhan.
dembigo'aan qaadashodaroogadaKHLAsharci-dejintamukhaadaraadka syntheticsharciga
Carl-Cyril Dreue ayaa qoray:
2 Juun 2020 ee 19: 06
Gabal aad u fiican
Waxaan si firfircoon isku dayayaay u joojinta sharcigan in muddo ah Markii dad badani ka walwalaan waxa ka sii fiican.